China otomatiki Yekumhanyisa-kumhanya Calendering Machine fekitori uye vanotengesa | Sunkia
Pepa feed inotora yazvino mhando pepa feeder-yakanyanya kushanda; Vacuum kubvisa mapepa-akatsiga, pasi ruzha; imwe chete tireyi simbi ndiro bepa-kusunda ngoro inochengetedza manpower uye bepa yekuisira nguva, basa kugona kunatsiridzwa; simudza-yerudzi rwekutakura-iyo yekugadzirisa uye yekuchenesa nzvimbo yakafara uye yakapfava.
♦ Pepa inosimbisa inotora yazvino mhando pepa feeder-yakanyanya kushanda; Vacuum kubvisa mapepa-akatsiga, pasi ruzha; imwe chete tireyi simbi ndiro bepa-kusunda ngoro inochengetedza manpower uye bepa yekuisira nguva, basa kugona kunatsiridzwa; simudza-yerudzi rwekutakura-iyo yekugadzirisa uye yekuchenesa nzvimbo yakafara uye yakapfava.
♦ Ziso remagetsi rekumira pane inoendesa ndiro yesimbi, shandisa yakatumirwa yakatarwa kure-kure kure ziso remagetsi, dzivisa ziso remagetsi kubva pakuratidzwa kune yakanyanya tembiricha, uye kuwedzera hupenyu hwebasa.
58kw (Magetsi kudziyisa mhando), 15kw (Smhando yechikwata)
60kw (Magetsi kudziyisa mhando), 15kw (Steam mhando)
Muchina dhinda (L * W * H) mm
Pashure: Otomatiki Yekumhanyisa Yekumhanyisa Mashini ine inobhururuka banga (mvura-yakavakirwa glue / ine mafuta oiri / pre-yakavharwa firimu)
Zvadaro: Otomatiki Kutenderera Kutenderera Lamination Machine
Otomatiki grooving muchina